🥇 ▷ Sawirro cusub oo Samsung ah ayaa soo muuqday Galaxy M30s ✅
Sawirro cusub oo Samsung ah ayaa soo muuqday Galaxy M30s
Qaybta dambe ee soo socota ee Samsung ayaa horeyba hoos u dhacday. Samsung Galaxy M30s ayaa loo qorsheeyay in la soo bandhigo 18ka Sebtember waana cusboonaysiinta caanka ah ee Samsung Galaxy M30 Hadda waxa uu hadda u soo muuqday hay’ad sharciyeynta Shiinaha ee TENAA isaga oo leh sawirro muujinaya qaabkiisa, oo ah naqshad lagu garto shaashad oo leh meegaar aad u yar iyo sidoo kale cirib yar iyo kaamiro gadaal ah oo leh seddex sawir oo la socda sawirka faraha.
Dhamaan faahfaahinta Samsung Galaxy M30s ee cusub
Tani waa waxa aan ka ognahay oo dhan Samsung Galaxy M30s, taas oo aan yarayn. Miyay mudan tahay in la bixiyo xitaa haysashada Samsung Galaxy M30? Waxaan kaga tagi doonnaa shaki dhawr maalmood gudahood.
6,000 mAh batteriga iyo kamarad gadaal ah oo saddex laab ah
Mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee Samsung Galaxy M30s-ka cusub ayaa shaki la’aan shaki gelinaya baterigiisa, isagoo si muuqata uga sarreeya midka walaalkiis M30. Waxaan lahaan doonaa batter, feejignaan, aan ka yarayn 6,000 mAh (oo la jaan qaadaya bixinta deg degga ah ee 16W) jaantus cajiib ah oo noo suurta gelin doonta inaan u isticmaalno moobaylka ugu yaraan saddex maalmood isticmaalka caadiga ah iyo dhawr maalmood oo adeegsi ah. Oo shaashaddaada? Hagaag, waxay noqon doontaa teleefoon weyn, oo leh cabbir 159 x 75.1 x 8.9 mm iyo culeys 174 garaam ah, oo leh 6.4 inji Super Amoled bandhigay iyo Full HD + xallin maadaama aysan yareyn karin.
Haddaad gudaha gudaha ka eegto waxaan arki doonnaa aaladda Exynos 9611 oo processor-ka wata oo leh ‘Mali G71 GPU’, oo ah sideed-processor cusub oo leh xawaare saacaddiisu sareyso 2.3 Ghz oo ay weheliso xusuusta. 4GB Ram iyo 64GB oo kayd ah, hal nooc, iyo 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo kayd ah qayb kale. Hadeysan tan ku filneyn, ha walwelin, maxaa yeelay waxaad ku kordhin kartaa awoodooda ilaa 1 qaaxada adoo galaya kaarka MicroSD koonaha loogu tala galay.
Iyo qaybta sawirka? Hagaag, gadaasha waxaan heysanaa konton seddex konton muraayadood oo ka kooban aaladda ugu weyn 48 megapixels oo leh focal aperture f / 1.9, 5 megapixel camera iyo aperture f / 2.2 si loo cabbiro qoto dheer ee booska oo loo bixiyo muuqaal ka fiican iyo saddex geesood xagal ballaadhan oo leh aperture aperture f / 2.2. Kameerada hore, oo ku dhex taal meesha sare ee shaashadda, waxaan haysan doonnaa 24 megapixel sensor oo leh fooshiska fcal 2.0.
Raadiyaha FM-ka iyo dekada taleefanka gacanta
Aynu hadda la tagno mawduuca isku xirnaanta. Waxa intaa u dheer labada duleel ee WiFi iyo 4G LTE waxaan dabcan lahaan doonnaa GPS, Bluetooth 5.0 iyo sidoo kale raadiyaha FM-ga ee ugu xiisaha badan, NFC lacag-bixinnada mobilada iyo dib u rogaal celinta isku xirka USB Type-C iyo 3.5 minigor deked si aad ugu xirto taleefoonka dhagahaaga. Nidaamka qalliinka, waxaan haysanaa Android 9 horay loogu sii rakibay cusboonaysiinta Android 10 had iyo jeer wuxuu ku hoos yaal lakab shaqsiyeedka Samsung One UI.
Ilaa iyo hada lama oga goorta mobilkan cusub laga heli doono dhulka Yurub ama waxa uu noqon doono qiimaha aan ku iibsan karno. Ugu yaraan waxay u muuqataa inaad ku dooran karto laba midab, madow iyo buluug, oo leh naqshad balaastig ah oo dhalaalaya. Waa inaan sugnaa illaa 18ka Sebtember ee soo socota markay soo baxeyso, ugu dambeyntiina, aan shaki ka baxno. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagu xantaa in aan awoodo qiimo ka yar 200 euro.
Warar kale oo ku saabsan… khadka dhexe, Samsung Galaxy